डा. प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले गर्दैछ प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण !
डा. प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले गर्दैछ प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण !
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी बुधबार दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने भएको छ । त्यसका लागि उनी सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना हुँदै छन् । ओलीलाई उनकी भान्जीले मिर्गौला दिने उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले बताए । प्रत्यारोपणअघि उनलाई कुनै समस्या आए मिर्गौला दिन नातिनी र भान्जा पनि तयार छन् । दुवै मिर्गाैला फेल भएपछि ०६४ मा भारतको अपोलो अस्पतालमा ओलीको पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
प्रत्यारोपणको तयारीस्वरूप आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको ग्रान्डी अस्पतालमा कोलोनोस्कोपी गरिएको छ । प्रत्यारोपण गर्नुपूर्व कोलोनोस्कोपी गरिन्छ । यसअघि उनको मुटुको अवस्था हेर्न मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा एन्जियोग्राफी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली गत १८ साउनमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएका थिए । २७ साउनमा स्वदेश फर्किएका उनले ५ भदौमा फेरि सिंगापुर पुगेर प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियामार्फत उपचार गराएका थिए । त्यसले काम नगरेपछि ओलीको मिर्गौला डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । उनले १४ कात्तिकदेखि नियमित डायलाइसिस गराउँदै आएका थिए ।
सन् २००८ यता देशभर करिब एक हजार पाँच सयमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको डा. ज्ञवालीले बताए  । पहिलोपटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि सोही बिरामीले दोस्रोपटक प्रत्यारोपण गरेका उदाहरण पनि छन् । ‘शिक्षण अस्पतालमा मात्रै आठजनामा दोस्रोपटक सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि दुईवटा गरिएका छन् । यो शतप्रतिशत सफल हो,’ डा. ज्ञवालीले भने । प्रत्यारोपण गरिएका सबैले सामान्य जीवन व्यतीत गरिरहेको उनले बताए ।